Madagasikara: Rivodoza nandravarava nanome lalana ny tadiom-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2009 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Swahili, Português, English
Nivoaka ihany nony farany ny antontan'isan'ny fahapotehana nateraky ny rivodoza Fanele rehefa avy nandalo andro vitsivitsy teto Madagasikara. Nisidina tany amin'iray amin'ny faritra nandalovan'izany rivodoza izany ny filoha Ravalomanana hijery ny haben'ny fahavoazana.
Raha mbola tsy manana vohikala ho azy ny BGNRC (sampan-draharaha misahana ny fikarakarana raha misy ny voina sy ny loza) dia azo jerena ao amin'ny open-source Google map avy amin'ny mpamaham-bolongana roa Marie Sophie Digne sy Tomavana (fr) ny tatitry ny vokatry ny fahavoazana.
Indro misy famintinana ny fahavoazana, araka ny IRIN, amin'ny alalan'ny ReliefWeb:
Manambara ny atontan'isa avy amin'ny BNGRC fa 8 no maty, 40 400 ny olona tra-boina, ary 63 000 hafa ahiana ho tratrany ihany koa raha mbola mijojo any @ faritra Menabe ny orana noho ny fandalovan'ny rivodoza Fanele. Mbola eo ampanombanana ny haben'ny fahavoazana moa ny mpiasa ka heverina mbola hitombo io isa io rehefa voangona avokoa ny vaovao rehetra momba izany.
Mirohondrohana noho ny vaovao politika sy ny famoahan-kevitra mifandraika amin'ny famoriam-bahoaka tontosaina androany (24 janoary) sy ny antso hanaovana fitokonam-be mandra-pialan'ny governemanta manontolo ny tontolom-bolongana malagasy.
Maro ny mpamaham-bolongana no mitantara mivantana sy mamoaka sary ny toe-draharaha (misy sary hafa ao amin'ny facebook).
Nanana TV VIVA ary mbola manana ny radio mitovy anarana aminy i Andry Rajoelina (na Andry TGV). Nanapa-kevitra ny hanakatona ny TV VIVA ny minisiteran'ny fifandraisana noho ny lahatsary fanadihadiana iray navoakan'ny toby. Hafatra avy amin'ny Filohan'i Madagasikara teo aloha, Didier Ratsiraka izy io [..] Hatramin'io fotoana io dia nanome fe-potoana farany ny Ben'ny tanàna hanokafana indray ny TV mialoha ny 13 janoary [..] Nanasa ny mponin'Antananarivo hitokona INDRAY i Andry androany 24 janoary.
( sarim-pihetsiketsehana avy amin'i ariniana )
Mpamaham-bolongana Jentilisa no namakafaka lalina ny resaka ataon'ny vondrom-politika roa tonta ary manohitra ny fampielezana ny tsahotsaho tsy voamarina (mg):
Mpamaham-bolongana Avylavitra no mampahatsiahy antsika fa miezaka ny hanakatona ny VIVA radio ny fitondrana nefa tsy mitombina ny anton'izany. Misy ny lalàna tsy manaiky ny hampielezana ny fampielezam-peon'ny tsy miankina manerana ny firenena. Nefa misy ny Radio MBS manohana ny fitondrana efa nampiely ny feony manerana ny firenena nandritra ny 5 taona tsy nahazo fampitandremana akory (mg):
( Akanjo Malagasy “yes we can” avy amin'i avylavitra)
Mialisoa Randriamampianina, sady mpamaham-bolongana no mpanao gazety no malahelo mahita indray ny fiverenan'ny tranga tamin'ny 2002, sy ny fahadisoana mitovy hita, fomba fiteny mihantsy ady mitovy ary tsikariny fa mbola lavitry ny fahamatorana ny demaokrasia (fr):
Raha tsy misy fikolokoloana politika matotra mihitsy dia hampiditra ny tenany ho iharan'ny tsy rariny, ka hitabataba lalandava ary tsy mba malina ireo vahoaka ireo [..] Tahaka izay nataony tamin'ny 2002 ihany no hataony amin'ny 2009 [..] ny arabe hatrany no atao lala-tokana tsy azo idifiana. Ary dia mety hisy fipoahana anaty izay tsy voatery ilaina indray. Tsy maintsy misy kosa ny fomba hahafahana mifankahazo, fa tsy maika ny hifampihantsy sy hifanjanaka amin'ny tsy misy dikany. Mandra-pahatongan'ny fitoniana anaty, dia indreto isika, mandeha an-jamabny sy araka izay hita fotsiny. Ary dia izany no antsoina hoe ” fikatsahana ny demaokrasia”
Randy mpamaham-bolongana sady mpanao gazety ihany koa dia manaiky fa mety tsy mbola vonona hanaraka ny tena fanao demaokratika i Madagasikara (fr):
Ary izay no tena mampanahy ny sasany. Satria amin'ny firenena eto amin'ny kaontinanta izay miditra amin'ity lalao ity, dia amin'ny fiaraha-mientana hihetsiketsika hatrany no hanombohan'ny fanaovana sarimihetsika.
Tsy noadinoin-dRajiosy ny fikirizana ataon'ny vahoaka nampiakatra azy eo amin'ny fitondrana nefa mandrahondrahona azy kosa ankehitriny (fr):
Ny esoeson'ny tantara dia ilay olona nihoam-pefy tamin'ny fitondrana teo aloha no miady mafy mba hampiverina ny fahefam-panjakana sy hampitombina ny andrim-panjakana. Tsy maintsy miatrika izany izy haharetany. Asa sarotra satria misy mankony olona no miovaova hevitra be ihany.
Tontolon'ny twitter mihamatotra
Fa ny tena mahaliana ihany koa dia ny nisongadinan'ny tontolon'ny twitter izay mandefa ny fioaran'ny toe-draharaha politika toy ny mivantana mihitsy. Afaka manaraka mivantana ny fitantaran'ny tweets ianao amin'ny alalan'ny fampidirana karoka #madagascar:
Mitaky ny hialan'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fitondrana i Andro Rajoelina ary mantsony hanaovana fitokonana faobe manomboka ny alatsinainy izao.
Nanao fanambarana ny minisitry ny atitany raha efa tonga eny amin'ny vavahadin'ny VIVA kosa ny mpitokona.
Sary sy fitantarana mivantana ao amin'ny bolongan'i jentilisa
Ho an'ny mpampiasa Twitter any Madagasikara, miangavy mba hampiasa ny #madagascar hash/tag mba ho mora hitan'izay liana hanaraka vaovao mafana.